Date My Pet » Ahoana izao hanalana Online Dating mikitoatoana
Last nohavaozina: Jan. 20 2020 | 3 min namaky
Ny tena hevi-diso mahazatra ny aterineto no mampiaraka ny hoe mbola fantany ny olona hoe mampidi-doza ny asa ara-tsosialy. Impiry no tsara hoe (ary matetika sambatra am-tia) namana gasped tamin'ny zava-doza, rehefa nilaza momba ny aterineto matchmaking toerana fa efa nanao sonia fotsiny amin'ny? "Ahoana raha mihaona ny olona dodgy?", "Tsy misy atahorana mihitsy?"Ary" ny mombamomba rehetra dia ho hita ho an'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao mba hahita!"Dia fanontaniana sy hevitra malaza fa ny iray dia mandray matetika rehefa manao ny filazana fa izy ireo dia ny mba hanome toerana mampiaraka amin'ny aterineto ny Mandehana. Marina fa misy loza any an-tserasera murky mampiaraka, dia mety ho ny tsy fahamarinana ny milaza fa mety ho mampidi-doza kokoa noho ny, milaza, maka olona avy amin'ny tapa. Raha ny tena izy, Asehon'ny antontan'isa fa vao haingana ao amin'ny 2013, 17% ny mpivady voalohany nihaona an-tserasera.
Mazava ho azy fa, fiarahana anaty aterineto dia raikipohy izay miasa tsara ho an'ny olona sasany karazana. Ireo izay efa nahita fahombiazana amin'ny toerana ireo teo aloha tsy afaka hihaona voafidy mpiara-miasa noho ny antony maro. Toy ny zavatra hafa rehetra, aza, Tsy izany fomba failsafe-tanety ny manan-danja hafa. Na izany aza, raha efa reraka indrindra ao amin'ny fitadiavana làlana ny fahasambarana, fiarahana amin'ny aterineto dia safidy toy ny hafa. Voalohany dia mety ho kely mpampiasa tototry ny midadasika ny aterineto mampiaraka. Voalohany eny, tsy misy hevitra amin'ny fampielezana ny tenanao koa masiaka. Antoka, dia tena tsotra ny resaka famoahana ny sary na roa, manoratra tsipika vitsivitsy izay ny toetra tsara indrindra seho manokana, Midira gazety ary maniry ny tsara indrindra ho an'ny. Etsy ankilany, fa ho tsara kokoa mba hitarika kely fikarohana sy hahita bebe kokoa momba ny isan-karazany an-tserasera mampiaraka toerana izay misy. Mety ho tsara koa ny hevitra mba hahazoana fanazavana fanampiny momba ny toerana izay manana ara-jeografika clientele izay manintona.
Rehefa sonia teo amin'ny toerana samy hafa, aza adino ny namaky tsara ny soratra. Eny, ireo toerana ireo hugely malaza amin'ny fiakaran'ny tahan'ny fahombiazana. Na izany aza, izany tsy maharary ny hahalala ny vidin'ny saram mpikambana isam-bolana. Ny sasany dia fantatra toerana handidy saram fanampiny mba ho anao ny mahazo ny fidirana ho mpikambana iray midadasika kokoa mombamomba ny hafa kosa mety ho vola fanampiny ho an'ny lalao mahomby dehibe. Tadidio foana fa ireo toerana ireo orinasa izay manome ny asa fanompoana ho anao. Dia ny asa fanompoana tsara antoka fa mbola tsy te-ho tratra handoa mihoatra noho ny tena tsy maintsy. Maro ny toerana mendrika ho anao misy izay tsy lafo baomba.
Ny ankamaroan'ny olona izay mba tsara vintana fa ny manan-danja hafa hihaona amin'ny alalan'ny fiarahana toerana ihany no nanao izany amin'ny ezaka sy ny faharetana. Tadidio fa tsy izany no fomba iray failsafe hooking ny amin'ny olona iray. Toy ny tany amin'ny fiainana, fihaonana mety mpiara-miasa dia vokatry ny fotoana, vintana sy ny fikirizana. Toy izany, Tsy mahatsiaro kivy raha toa ka tsy-tanety ny daty araka ny voalohany volana ny sonia ho fanompoana mampiaraka izany. Roma fa tsy natao tamin'ny andro iray tsy hisy ny fifandraisanareo. Manokana fotoana mba handeha amin'ny alalan'ny olona hafa ny toetra ary mifanerasera ireo izay tsapanao mahaliana anao indrindra. Na inona na inona mety hitranga, fa farafaharatsiny efa fantatrao ianao nanao ny dingana voalohany.
Raha efa nanana fahafahana mba "hihaona" olona iray tianao, ary avy eo an-tserasera soa aman-tsara antoka ny daty, tsy hametraka be loatra ny fanerena amin'ny fihaonana ity. Toy ny hafa rehetra daty voalohany, izany dia mety ho nianjady fihaonana. Na izany aza, mieritreritra ny daty rehetra nisy ianao tany aloha. Azo antoka ny toerana tena ireo no ireo izay Afaka ny hamela ny volo teo, mifalia amin'ny fanantenana farany ambany. Ny fitsipika ankapobeny ny ankihibe dia ny hamela iray ao amin'ny fianakaviana na namana akaiky mahalala ny fotoana sy ny toerana koa ny fivoriana. Mety ho ny daty dia tsy mitondra any amin'ny zavatra mampidi-doza foana fa mandoa ny milalao azy io soa aman-tsara.
Voalohany mpampiasa ny aterineto mampiaraka tsara toerana mety mahita izany ho mampatahotra traikefa. Fomba tsara iray mba hijery izany ho tsotra izao fa ny iray amin'ireo tena mahomby sy ny fitaovana ilaina mampiaraka ny taona ankehitriny. Tsarovy fa ny ankamaroan 'ny toerana mpikambana nanao sonia ho an'ny tanjona iray ihany tahaka ny tenanao: mba hitady ny fitiavana. Ka hamaha ireo sorony, tsoratra izany ary manomboka eo ny mombamomba ny aterineto dia mampiaraka!